(ခရစ်ယာန်) Discovery ၏အယူဝါဒဆိုတာဘာလဲ
သမိုင်း & ယဉ်ကျေးမှု Native အမေရိကန်သမိုင်း
ဖက်ဒရယ်အိန္ဒိယပညတ်တရား၏ရာစုနှစ်နှစ်ခုတစ်ရှုပ်ထွေး interweaving ဖြစ်ပါတယ် တရားရုံးချုပ် ဆုံးဖြတ်ချက်များ, ဥပဒေပြုရေးလုပ်ရပ်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်မှာလုပ်ရပ်တွေကိုအားလုံး Native အမေရိကန်မြေများ, အရင်းအမြစ်များနှင့်ဘဝတွေကိုဆီသို့ခေတ်ပြိုင်အမေရိကန်မူဝါဒအပုံသေနည်းပေါင်းစပ်။ ပညတ်တရား၏အပေါငျးတို့သအလောင်းတွေနဲ့တူအိန္ဒိယအိမ်ခြံမြေနှင့်ဘဝတွေကိုအုပ်ချုပ်ကြောင်းဥပဒေများ, အခြားဥပဒေများနှင့်မူဝါဒများကိုဆောက်လုပ်ထားသည့်အပျေါမှာဥပဒေရေးရာအယူဝါဒသို့ coalescing, မျိုးဆက်မှအမတ်များ၏မျိုးဆက်မှထောကျခံခဲ့ဖြစ်ကြောင်းဥပဒေရေးရာရှေးထုံးများထွက် set ဥပဒေရေးရာအခြေခံမူအပေါ်အခြေခံထားတယ်။
သူတို့ကတရားဝင်မှုနှင့်တရားမျှတမှု၏အခြေခံ presuppose, ဒါပေမယ့်ဖက်ဒရယ်အိန္ဒိယပညတ်တရား၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအချို့ပွဲတစ်ပွဲမူရင်းစာချုပ်များ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်, ပင်ဆန့်ကျင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မြေများအိန္ဒိယအခွင့်အရေးများချိုးဖောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ဒေသနာသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်များ၏မဲဆန္ဒနယ်အခြေခံမူတစ်ခုဖြစ်တယ် နေထိုင်သူကိုလိုနီစနစ်
ဂျွန်ဆင် v ။ McIntosh
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ဒေသနာပထမဆုံးအမေရိကန်တရားရုံးတှငျကွားရ Native Americans တွေနှင့်စပ်လျဉ်းပထမဦးဆုံးအမှုဖြစ်ခဲ့သည်သောတရားရုံးချုပ်အမှုဂျွန်ဆင် v ။ McIntosh (ဆိုသည်မှာ 1823 ခုနှစ်), ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခဲ့သည်။ ဖြစ်ချင်တော့, ကိစ္စတွင်ပင်တိုက်ရိုက်မဆိုအင်ဒီးယန်းပါဝင်ဘဲ, အစားကြောင့်တစ်ချိန်က Piankeshaw အင်ဒီးယန်းများကအဖြူရောင်လူအားကသိမ်းပိုက်ရောင်းချပွညျ၏ဥပဒေရေးရာခေါင်းစဉ်၏တရားဝင်မှုကိုမေးခွန်းထုတ်ထားတဲ့နှစ်ခုအဖြူယောက်ျားအကြားမြေယာအငြင်းပွားမှုပါဝင်ပတ်သက်။ သီးခြားနှစ်ခုရှိသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့် (တရားလိုသောမတ်စ်ဂျွန်ဆင်၏ဘိုးဘေးတို့ 1773 နှင့် 1775 ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယကနေမြေယာဝယ်ယူနှင့်တရားခံဝီလျံ McIntosh မြေယာ၏တူညီသောကှကျလို့ယူဆတယ်ခဲ့ရာအပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်တစ်ဦးမြေယာမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ မြေယာနှင့်အမှု၏ချောထုပ်တဲ့အာဏာရအတင်းအကျပ်၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ယူဆောင်ခဲ့သည်) ။
အဆိုပါတရားလိုကသူ့ခေါင်းစဉ်ကိုသာလွန်ခဲ့ပါတယ်ပေမယ့်တရားရုံးအိန္ဒိယကိုပထမဦးဆုံးရာဌာန၌မြေယာဖော်ပြရန်မဥပဒေရေးရာနိုင်စွမ်းရှိခဲ့သောပြောဆိုချက်ကိုအောက်မှာပယ်ချခဲ့သောအခြေခံပေါ်မှာတစ် eject များအတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါကိစ္စတွင်ပယ်ချခံခဲ့ရသည်။
တရားသူကြီးချုပ် John Marshall တစ်တညီတညွတ်တည်းတရားရုံးများအတွက်အမြင်ရေးသားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာသစ်နှင့်လာတော့သည်သောစစ်ပွဲများအတွက်မြေယာများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ဥရောပအင်အားကြီးနိုင်ငံ '' ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်. မိမိအဆွေးနွေးမှုမှာတော့မာရှယ်နိုင်ရန်အတွက်ဥရောပပဋိပက္ခဖြစ်အခြေချနေထိုင်ရှောင်ရှားရန်ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်လူမျိုးဝယ်ယူ၏ညာဘက်သူတို့တစ်တွေသည်ပညတ်တရားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမယ်လို့တစ်နိယာမတည်ထောင်ခဲ့သည်။
"အဲဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှု subjects တဲ့သူသို့မဟုတ်သူ၏အခွင့်အာဏာအားဖြင့်အစိုးရမှခေါင်းစဉ်ကိုပေး၏ဒီနိယာမ, ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်ကိုအပိုင်ခြင်းဖြင့် consummated စေခြင်းငှါအရာ, ရှိသမျှသည်အခြားသောဥရောပအစိုးရများကဆန့်ကျင်, ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ခဲ့ပါတယ်။ " သူက "ရှာဖွေတွေ့ရှိဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်သိမျးပိုကျခွငျးအားဖွငျ့ဖြစ်စေ, ထေို၏အိန္ဒိယခေါင်းစဉ်ငြိမ်းအေးဖို့သီးသန့်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ " အဲဒီထပ်မံရေးသားခဲ့သည်
အနှစ်သာရမှာအမြင် (ယေဘုယျအားဖြင့်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒ) ဖက်ဒရယ်အိန္ဒိယတရားဥပဒအများကြီးထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိအယူဝါဒ၏အမြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်အများအပြားဒုက္ခသဘောတရားများကိုဖော်ပြထား။ ၎င်းတို့အနက်ကအမြိုးအနှယျသာလုံးဝပြီးသားဥရောပတိုက်သားများနှင့်အမေရိကန်လူမျိုးတို့၏အင်ဒီးယန်းတွေနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့စာချုပ်များများ၏ရမှတ်များလျစ်လျူရှု, ထေို၏ညာဘက်ပိုင်ဆိုင်နှင့်အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုအိန္ဒိယမြေများနှင့်ပြည့်ဝ၏ပိုင်ဆိုင်မှုပေးလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခုကအစွန်းရောက်အနက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အားလုံးမှာဇာတိမြေယာအခွင့်အရေးကိုလေးစားရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုမပေးကြောင်းဆိုလို။ အဆိုပါအမြင်လည်းပြဿနာဥရောပတိုက်သားများ, ယဉ်ကျေးမှုဘာသာရေးနှင့်လူမျိုးရေးသာလွန်၏အယူအဆအပေါ်မှီခိုခြင်းနှင့်မာရှယ်သိမျးပိုကျ၏ "သာမန်ထက်ဟန်ဆောင်" ခဲ့ဝန်ခံမည်ဟုအရာကိုမျှတမှုတစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ်အိန္ဒိယ "ကြမ်းကြုတ်" ၏ဘာသာစကားကိုချထား။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပညာရှင်များအုပ်ချုပ်သောဥပဒေရေးရာဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုစောဒကတက်ခဲ့ကြ Native Americans တွေ ။
အချို့ကဌာနေဥပဒေရေးရာပညာရှင်များ (အရှိဆုံးအထူးသစတီဗင် Newcomb) ကိုလည်းဘာသာရေးတရားသေအယူဝါဒရှာဖွေတွေ့ရှိအယူဝါဒအကြောင်းကြားထားတဲ့အတွက်ပြဿနာနည်းလမ်းများအထဲကထောက်ပြကြသည်။ မာရှယ် unapologetically ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကိုသူတို့အသစ်ကမြေများကိုတက်ဝေယူမယ်လို့ဘယ်လောက်ဥရောပတပါးအမျိုးသားတို့အဘို့မူဝါဒအစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အတွက်အလယ်ခေတ်ဥရောပများ၏ဥပဒေရေးရာဥပဒသေမြားအပျေါမှီခို "ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ " ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထိုင်လျက်ကထုတ်ပေးအမိန့်ပြန်တမ်း (အထူးသဖြင့် 1493 ရဲ့ပုပ်ရဟန်းမင်း Bull အင်တာမီလန် Caetera အလက်ဇန္ဒား VI ကိုထုတ်ပေး) ခရစ်ယာန်အာဏာရသူတို့က "တွေ့ရှိခဲ့" ဟုအဆိုပါမြေများ monarchs ဘို့တောင်းဆိုဖို့ခရစ္စတိုဖာကိုလံဘတ်စ်နဲ့ဂြှတူသောစူးစမ်းရှာဖွေသူများမှခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲဖို့သူတို့ရဲ့လေ့လာရေးခရီးစတင်ပြေးလွှားထံအသနားခံ - အင်အားသုံးခြင်းဖြင့်ထို့နောက်ဘုရားကျောင်း၏အလိုတော်ဘာသာရပ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုသောသူတို့သည်ကြုံတွေ့လိုအပ်သော --the "သာသနာပလူ" ဆိုရင်။ သူတို့ရဲ့သာကန့်သတ်သူတို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ကိုအခြားခရစ်ယာန်ဘုရင်စနစ်အားဖြင့်အခိုင်အမာမရနိုငျသောဖြစ်ခဲ့သည်။
မာရှယ်သူဘာသာရပ်အပေါ်မှာစာရွက်စာတမ်းများလုံလောက်သောနှင့်ပြည့်စုံကြသည် "wrote အခါအမြင်တွင်ဤပုပ်ရဟန်းမင်းအနှားတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်စောစောတစ်နှစ်အဖြစ် 1496 သူမ၏ [အင်္ဂလန်ရဲ့] ဧကရာဇ်, ခရစ်ယာန်လူများထို့နောက်မသိသောနိုင်ငံများတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းငှါ, Cabots ရန်ကော်မရှင်ခွင့်ပြု နှင့်အင်္ဂလန်၏ရှင်ဘုရင်၏နာမ၌သူတို့ကိုသိမ်းယူခြင်း။ " အင်္ဂလန်, အသင်းတော်များ၏အခွင့်အာဏာအောက်တွင်ဤသို့အလိုအလြောကျထို့နောက်တော်လှန်ရေးအပြီးအမေရိကားမှဖော်ပြလိုအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်မှခေါင်းစဉ်ကိုအမွေခံရလိမ့်မယ်။
ဘေးဖယ် outmoded လူမျိုးရေးခွဲခြားအယူဝါဒအပေါ်မှီခိုများအတွက်အမေရိကန်ဥပဒေစနစ်ကိုဆန့်ကျင်ပေးဆောင်သည့်ဝေဖန်မှုများ မှစ. , ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဩဝါဒဝေဖန်သူများကလည်းအမေရိကန်ကအိန္ဒိယလူမျိုးများ၏လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ဒေသနာကိုလည်းကနေဒါ, သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်၏ဥပဒေရေးရာစနစ်များသို့ယင်း၏လမ်းရှာတွေ့ခဲ့သည်။
Getches, Wilkinson နှင့်ဝီလျံ။ ဖက်ဒရယ်အိန္ဒိယဥပဒေ, ပဉ်စမထုတ်ဝေအပေါ်အမှုပေါင်းနှင့်ပစ္စည်းများ။ သွန်မ်ဆင်အနောက်ကြေညာသူ, 2005 ။
Wilkins တို့နှင့် Lomawaima ။ မညီမညာဖြစ်နေသောမြေပြင်: အမေရိကန်အိန္ဒိယအချုပ်အခြာအာဏာနှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ။ -Norman: ဥက္ကလာဟိုးမားစာနယ်ဇင်း, 2001 တက္ကသိုလ်။
ဝီလျံ, Jr. ဝန်လက်နက်လိုပဲရောဘတ်အေ: အဆိုပါ Rehnquist တရားရုံး, အိန္ဒိယအခွင့်အရေးနှင့် America မှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအတွက်ဥပဒေရေးရာသမိုင်းကြောင်း။ Minneapolis: မင်နီဆိုတာစာနယ်ဇင်း, 2005 တက္ကသိုလ်။
Native အမေရိကန်ကြိုတင်မှာအကြောင်း4အချက်အလက်
ပြင်သစ် & အိန္ဒိယ / ခုနစ်နှစ်စစ်ပွဲ
ပြင်သစ်နှင့်အိန္ဒိယ / ခုနစ်နှစ်စစ်ပွဲ
ဘယ်လိုက Black Seminoles ဖလော်ရီဒါအတွက်ကျွန်ကနေလွတ်လပ်ခွင့်တွေ့
ပြင်သစ် & အိန္ဒိယ / ခုနစ်နှစ်စစ်ပွဲ: 1760-1763
ပြင်သစ်နှင့်အိန္ဒိယစစ်ပွဲ: ကွီဘက်တိုက်ပွဲ (1759)
ကို '80s ၏ထိပ်တန်းဂျက်ဖာဆန် Starship နှင့် Starship သီချင်းများ
တစ်ဦး Distant က Galaxy မျှော်ကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးဆူပါနိုဗာကဘာလဲသနည်း
Z ကိုမှတိရိစ္ဆာန် Profiles ဖြေသိပ္ပံအမည်အားဖြင့်
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဗျာဒိတ်ကျမ်းအဘို့ပြင်ဆင်ပါ 10 နည်းလမ်းများ
တပတ်ရစ်ကားယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် Reading သိကောင်းစရာများနှင့်အကြံဉာဏ် - VINs
Malcolm X ကို၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အစိမ်းရောင်ကဒ်အစီအစဉ်လိမ်လည်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်, GAO Says
Two-ခံရသောဒဏ်ချက်အား Telamonia ပင့်ကူ
လူသတ်မှု Sleepwalking: တစ်ဦးကရှားပါးကာကွယ်ရေး
Polyatomic Ion အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာများ
အားလုံးအချိန်အမွငျ့ဆုံးသောစုစုပေါင်းခရစ္စမတ်, Movies ဘာတွေလဲ?
မျိုးဗီဇ, လက္ခဏာရပ်တွေနှင့်ခွဲခြားမှု၏ Mendel ရဲ့ဥပဒေ